Nagarik News - श्रेयसीले जित्दा पूर्वमा खुशीयाली
चर्चित गायिकाहरू अञ्जु पन्त, मिलन अमात्य, रजिना रिमाल र अञ्जना गुरुङलाई पछि पार्दै 'सुनेँ खबर' बोलको गीतबाट उत्कृष्ट गायिका बनेकी १६ वर्षीया श्रेयसीलाई सम्मान गर्न पूर्वेलीहरू जुटेका छन्। 'श्रेयसीको जीत पूर्वेलीहरूको जीत हो,' संगीतपारखी भानेन्द्र सुब्बा सम्बाहाङ्फेले भने। उनलाई जिताउन धरानका सुधीरसिंह लिम्बूको संयोजकत्वमा प्रकाश सम्बाहाङ्फ,े हेमन्त लिम्बू, सुयोग पाख्रिन, शम्भु श्रेष्ठलगायत युवाहरूले 'श्रेयसी चेम्जोङ भोटिङ प्रचार प्रसार समिति' गठन गरेर पूर्वमा अभियानै चलाएका थिए। समितिले धरान, इलामलगायत पूर्वका विभिन्न ठाउँमा कन्सर्ट र भोटिङ अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
'सरकारले घर बनाउँदै हिँड्ने होइन'
पूर्वसचिव तथा शहरी विकास इन्जिनियर किशोर थापा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा निर्माण समूहका सदस्य हुन्। यो समूहले भूकम्पोत्तर...
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता १३ औँ महाधिवेशनको धपेडीमा छन्। महाधिवेशनपछि कांग्रेस कसरी अघि बढ्ला? यसले कस्तो नीति लेला? संगठन कसरी अघि बढाउला? कांग्रेसका शुभेच्छुक तथा राजनीतिमा...
नेपाली पौडीलाई ११ वर्षे गौरियाले नयाँ चुनौती दिएकी छिन्। बिदा मनाउन नेपाल आएकी गौरिका १९ औँ राष्ट्रिय खुला पौडीमा सात कीर्तिमान बनाउँदै लन्डन फर्कंदै छन्। गौरिकाले सातदोबाटोमा १३ र १२...